imo အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
2022.05.2051 for Android
ဒေါင်းလုပ် XAPK（32.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် imo-International Calls & Chat
IMO သည်အခမဲ့, ရိုးရှင်းပြီးမြန်ဆန်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်ဖြစ်သည်။
> ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိစာသားများသို့မဟုတ်အသံမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ, BR>
သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုအားနိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်ပါ။ နိုင်ငံတကာမက်ဆေ့ခ်ျများပို့ရန်အပိုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမရှိပါ။ Crystal Clear & HD အရည်အသွေးရှိသောလက်ငင်းအရည်အသွေးရှိသောလက်ငင်းအရည်အသွေးကိုကမ္ဘာတဝှမ်းရှိသူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများကိုခေါ်ဆိုပါ။ 👪
ဘာကြောင့် imo imo?
သည် 2G, 3G, 4G * သို့မဟုတ် Wi-Fi တို့တွင်အခမဲ့နှင့်အကန့်အသတ်မရှိမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အသံသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ။ 2G ကွန်ယက်နှင့်ပင်တသမတ်တည်းနှင့်တည်ငြိမ်သောအသံခေါ်ဆိုမှုများ! SMS နှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစွဲချက်များ, မက်ဆေ့ခ်ျတိုင်းအတွက်အခကြေးငွေများသို့မဟုတ်စာရင်းသွင်းခြင်းများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
fontrie> Fast Photo Video Sharing📹, Voice, Mind3, .mp3, .ZIP, .PDF, > Devices အားလုံးအတွက်> ✔️apps:
IMO messenger ကို Android, iOS, Windows နှင့် MacoS တို့မှအပြည့်အဝလက်လှမ်းမီနိုင်သည်။ သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျများအားလုံးကိုသင်၏ desktop သို့မဟုတ် Android tablet မှအခြားမီဒီယာများနှင့်တိုက်ရိုက်မျှဝေနိုင်သည်။
✔️laga90 "> ✔️land data အသုံးပြုမှု: ✔️land data အသုံးပြုမှု:
> font> တိုးမြှင့်ထားသောဒေတာအသွားအလာအသုံးပြုမှုထိရောက်မှု, ဒေတာအသုံးပြုမှုနည်းခြင်း, ကိုယ်ရေးရာဇဝင်, ရာနှင့်ချီသောအေးမြသော avatars များ, တေးဂီတအခင်းအကျင်းများနှင့်နောက်ခံမှရွေးချယ်ပါ။
imo app သို့ဝင်ရောက်ပါ သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့်သာအပိုဆောင်းအသုံးပြုသူအမည်သို့မဟုတ် PIN နံပါတ်ကိုမှတ်မိရန်မလိုအပ်ပါ။ သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများနှင့်လျင်မြန်စွာဆက်သွယ်ရန်သင်၏လိပ်စာစာအုပ်ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ 🦄 # 1b4a90 "> # 1b4A90"> ✔️clec-based:
သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများအားလုံး သင်၏ဖုန်းသိုလှောင်မှုကိုလွတ်မြောက်ရန်သမိုင်းနှင့်ဖိုင်များကို imo cloud တွင်လုံခြုံစွာစည်းညှိနိုင်သည်။ app ကိုပိတ်လိုက်ရင်တောင်သင်ဘယ်သောအခါမျှအသိပေးချက်များ, IMO Out သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ရိုးရာသယ်ဆောင်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင့်ကိုပိုမိုသက်သာစေလိမ့်မည်။ ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုစီအတွက်စျေးကြီးသောအခကြေးငွေများသို့မဟုတ်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းမရှိပါ။
IMO Big Group, IMO ဇုန်, IMO Live Streaming ဗွီဒီယိုနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်အသစ်များလာနေသည်! 🔥
* ဒေတာအခကြေးငွေသည်ဤအက်ပ်တွင်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ အသေးစိတ်အတွက်သင်၏ပံ့ပိုးသူကိုဆက်သွယ်ပါ။
တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် - https://imo.im/
ဘာအသစ်လဲ imo-International Calls & Chat 2022.05.2051
30% လောက်တော်ကောင်းတယ် Verygood